यसरी स्वस्थ रहनुहोस् चिसो मौसममा - ज्ञानविज्ञान
यसरी स्वस्थ रहनुहोस् चिसो मौसममा
शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन डीयुक्त खानेकुरा दूध, हरियो सागसब्जी, अन्डा, माछामासुलगायत खानेकुरा अधिक मात्रामा खाने गर्नुहोस् । याद गर्नुहोस्, भिटामिन डीले शरीरमा रोगसित लड्ने क्षमता बढाउँछ र शरीर स्वस्थ रहन सक्छ ।
राजधानीसँगै देशभरको वातावरण चिसो हुँदै छ । चिसो बढेसँगै सर्वसाधारण शरीरको सुरक्षाका लागि न्यानो कपडा किन्न थालेका छन्, तातो खानेकुरामा जोड दिन थालेका छन् । चिसोले छोयो भने विभिन्न समस्या देखा पर्छ । ज्वरो, रुघाखोकी, दम, झाडापखाला, जन्डिस, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । सो कारण चिसो मौसम सुरु भएसँगै आफ्नो सुरक्षामा पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
बिहान मात्रै होइन, दिनभरि तातो पानी सेवन गर्नुहोस् ।
तातो तथा झोलिलो सुप खानुहोस् । बदामले पनि शरीरलाई न्यानो प्रदान गर्दछ । तातो सुपले पानीको आवश्यकता पूरा गर्छ भने ताप र अन्य पौष्टिक तत्व पनि प्रदान गर्छ ।
तातो पानीमा मह मिसाएर खाने हो भने शरीरमा ताप प्रदान गर्दछ ।
स्वस्थकर खानेकुरामा जोड दिनुहोस् ।
शरीरमा रोग लाग्न नदिन गहिरो निद्रा आवश्यक पर्छ । प्रशस्त मात्रामा निदाउनुहोस् ।
घरबाट निस्किएसँगै मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् । यसले भाइरस संक्रमणबाट बचाउन मद्दत गर्दछ ।
व्यायाममा जोड दिनुहोस् । निरन्तरको व्यायामले शरीर फुर्तिलो हुन्छ ।
हाम्रो स्वास्थको सहयोगमा ।
Topics #चिसो मौसम #स्वस्थ
Don't Miss it यस्ता छन् केहि टिप्स महिलाको स्वास्थ्य शरीरका लागि
Up Next एक्स–रे गल्तीले आविष्कार भएको थियो
जाडाेमा रूघाखाेकी अर्थात् चिसाेका राेगहरूबाट यसरी जोगिनुहाेस्
जाडो महिना शुरु भईसकेको छ । काठमाडौँ लगायत देशभर जाडो बढ्दैछ । विषेश गरि जाडोमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ध्यान…
ब्रेन भनेको मानव मस्तिष्क हो । साथै ट्युमर भनेको अंगमा अनावश्यक मासु पलाउनु हो । सामान्य भाषामा भन्दा मस्तिष्कमा अनावश्यक…
कस्ता हुन्छन् विषालु च्याउ ? विषालु च्याउबाट बच्ने उत्तम उपायहरू यस्ता छन् जान्रुहाेस्
च्याउ एक प्रकारकाे तरकारी हाे । याे एक सुक्ष्म जीवाणुले बनेकाे हुन्छ । याे माटाेमा उम्रने धागाे जस्ताे ढुसी हाे…
यस्ता छन् जीवनभर निरोगी रहने केहि सूत्र
नेपाली समाजमा एउटा रमाइलो प्रसंग छ । जब कोही फलफूल बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् । छिमेकीले सोध्छन्, ‘होइन, कोहि बिरामी छ…
यस्ता छन् कहिलेकाही खुट्टा निदाउनुका कारणहरू, जान्नुहाेस्
कसरी हटाउने नाकको ब्ल्याक हेड्स ?
व्यक्तिको सुन्दरता मुलतः अनुहारमा केन्दि्रत हुन्छ । त्यसैले आफ्नो अनुहार सफा र चमकदार होस भन्ने चाहन्छौ । तर, अनुहारमा आउने…
गर्मीमा पनि गोडा सुन्निन्छ भने खतराको लक्षण हो
जाडोमा सामान्यता मासिसहरुमा गोडा सुनिने समस्या हुन्छ । तर चिसो बाहेक अरु समयमा पनि गोडा सुनिन्छ भने त्यो खतराको लक्षण…
सौन्दर्य निखारकोलागि कागतीको प्रयोग
यो भन्दा अगाडिको पोस्टमा हामीले कागतीको औषधोपचार बिसयमा चर्चा गरिम ।आज हामी सौन्दर्य निखारकोलागि कागती कति उपयोगी छ भनेर चर्चा…
बुढ्यौलीलाई पर धकेल्ने केही घरेलु उपाय यस्ता छन्
कागती र मह कागतीको रस र महको पेस्ट बनाई अनुहारको मसाज गर्ने र १० मिनेटपछि धुने । यसो गर्दा अनुहारको…
तुलसीको पातका फाइदाहरू बारे थाहापाउनुहोस
तुलसीले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल स्तरलाई कम गरेर मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । दिनदिनै तुलसीको पात चपाउने मानिसलाई मुटुरोग लाग्दैन । तुलसीले…
विषादीयुक्त फलफुल तथा तरकारीबाट कसरी बच्ने ? जान्नुहाेस् यस्ता छन् बच्ने उपाय
फलफूल तथा तरकारीमा विषादी सजिलै छुट्याउन त गाह्रो हुन्छ । यसको मापन गर्न यन्त्र उपकरणको आवश्यकता पर्छ ।तर पनि तरकारी…
पोलियोको बारेमा रोचक तथ्य
रायोको सागका यस्ता छन् गुण तर होसियार यस्तो बेलामा यसरी खानु हुन्न
जानकारीका लागि रायो, तोरीको परिवारमा पर्ने तोरी हो जस्तै तर तोरीको भन्दा ठूलो पात भएको मूख्य रूपमा तरकारीको रूपमा प्रयोग…